केही अब शब्द "हवाइजहाज" को Futurist कवि Vasily Kamensky गढा थाह छ। यदि छैन उहाँको लागि, हामी अब अन्य सबै ग्रह, हवाईजहाज मा एकै समयमा, तिनीहरू "Nieuport" र "Farman" हामीलाई लामो सम्बन्धित भएको प्रथम विश्व युद्ध को समयमा बासिन्दाहरू, जस्तै हावा यात्रा, गरे। अब रूस सबै आफ्नो र शब्द र कामहरू हुनुपर्छ कि सम्झना गर्न समय छ। र यात्री liners पनि। जुन 8 नयाँ रूसी यात्री विमान एमएस-21 को प्रस्तुति भएको थियो। इर्कुत्स्क मा, प्रधानमन्त्री अवसर लागि आइपुगे।
रूसी आकाश हिजो र आज
सोभियत नागरिक विमान वैश्विक उड्डयन बजार को आफ्नो महत्वपूर्ण साझेदारी द्वारा प्रमाणित, कुनै तरिका पश्चिमी समकक्षों गर्न कमसल मा (सैन्य उल्लेख छैन)। यो राजनीतिक परिस्थिति लागि भने थप हुन सक्छ। तर, यो देखि र अब उम्कन सक्दैन, र चुनौती भनेर घरेलू, कम से कम, रूसी एयरलाइन्स र केही विदेशी सुनिश्चित छ। आकाश मा वर्तमान समयमा प्राय तपाईं "Boeing" देख्न सक्नुहुन्छ, "Airbus", "Fokker" वा कुनै पनि क्यानाडा "Bombardier" मेशिन डिजाइन Tupolev र Ilyushin ब्यूरो भन्दा। निस्सन्देह, प्रत्येक मार्ग लागि यसको प्रकार, लम्बाई र यात्री यातायात, क्रमशः विमान आवश्यक छन्, तर एम सी-21 सबै दुनिया भर धेरै लोकप्रिय छ आला वस्तुतः सबै विकसित देशहरूमा मुख्य यात्री प्रवाह प्रदान मध्यम liners। साथै, यस प्रकार परिमार्जनहरू को परिवहन लागि उपयुक्त छ। यो उहाँलाई, सम्भवत, घरेलू (र मात्र होइन) बजार मा विदेशी निर्माताहरु प्रेस हुनेछ छ।
विनिर्देशों र योजना
उच्च लागत बाहेक कारण उत्कृष्ट वायुगतिकीय र आधुनिक प्रविधिहरू को आवेदन सामाग्री विज्ञान, ग्लोबल उड्डयन उद्योग मा मुख्य वर्तमान र भविष्य रुझान गर्न airliner एमएस-21 पत्राचार सहित गर्न। यसलाई उच्च subsonic गति मा सार्ने, बह भाग र दुई इन्जिन, pylons मा निलम्बित संग एक कम monoplane को शास्त्रीय योजना अनुसार निर्माण को सक्षम छ। को fuselage को पुच्छर पनि चलनअनुसारको छ, एउटा गोलाकार पार खण्ड छ। त्यहाँ क्रान्तिकारी केही छ विमान को बाहिरी, लेआउट धेरै कम्पनीहरु द्वारा अघि प्रयोग भएको थियो कि एक समान छ। मिसिन उचाइ - 11.5 मिटर, लम्बाइ 42.3 मिटर, गैर-स्टप उडान अधिकतम सीमा - 5,9-6 हजार किमी।। परिमार्जन आधारमा
जबकि लाइन मात्र दुई प्रकार मोडेल प्रदान गर्दछ। एमएस-21-200 विमान 135 176 यात्रु, को कुर्सियों को नियुक्ति मा अन्तिम निर्णय, ग्राहक द्वारा स्वीकार गरिनेछ "व्यापार" क्षेत्र र "अर्थव्यवस्था" मा विभाजित छ जो प्राथमिकताहरू klassnosti सैलून, आधारमा अटाउँछन्। कुनै पनि घटना मा, प्रदान सान्त्वना स्वीकार्य छ। एमएस-21-300 संशोधन यसलाई मा 163 221 मानिसहरूलाई देखि बाहिरबाट पनि फरक थप आयोमी fuselage फिट। तदनुसार आफ्नो एक सय किलोमिटर गैर-स्टप उडान अवधि कम। सबै सिट धेरै आराम गर्दै छन्, र फिर्ता माउन्ट मनोरञ्जन केन्द्र बाहेक अब आदर्श छ। संशोधन पनि फरक एभिओनिक्स, नेभिगेसन र अन्य उपकरण छन्।
विकासकर्ता र निर्माताहरु
को airliner नाम ब्यूरो संग सहयोग मा NPK "Irkut" मा डिजाइन गरिएको थियो। YAkovlev, पूरै अद्वितीय र XXI सताब्दी मा पहिलो आधारमा 1991 मा लागू नयाँ रूसी परियोजना को इतिहास मा दोस्रो (को तू-204 पछि) छ। उत्पादन आधार सन्दर्भमा, यो तंग सहयोग को एक उत्पादन हो। त्यसैले, एक श्रृंखला शुरू पछि Ulyanovsk विमान बोट मा सानो घर को भित्री हुनेछ, मिसिन खत्म र चित्रकला र ग्राहक गर्न प्रत्यक्ष वितरण कार्यान्वयन। कारखाना मा "Aviastar" को fuselage को cladding प्यानल र सम्मेलनका सञ्चालन जारी गर्न योजना। सामान्य मा संलग्न लिमिटेड "Vaso" चक्र, JSC "AeroComposite" src आहार निर्देशन "प्रविधि", JSC "Rusaviainterer" र अन्य उद्योग कम्पनीहरु।
पहिलो प्रतिलिपि मिसिन, पहिल्यै लिइएको स्थान छ जो रोल-बाहिर, सम्पूर्ण इर्कुत्स्क उड्डयन प्लान्ट मा बनेको छ। पहिलो उडान ठूलो उत्पादन ग्राहकहरु गर्न प्रसव सुरु हुनेछ अर्को सुरु हुनेछ, र त्यसपछि, यो वर्ष पछि लागि योजना छ। निगम को अध्यक्ष को आश्वासन मा "Irkut" ओलेग Demchenko, को एमएस-21 प्रतियोगिता छैन भयानक, यो धेरै स्पष्ट लाभ, दुवै प्राविधिक र मूल्य छ छ। विमान लागि आदेश, 175 प्रतिलिपिहरू मा (अन्य डाटा अनुसार पहिले नै 186 मा) छ, तिनीहरूले पहिले नै zaavansirovany, र 2020 द्वारा योजना 40 प्रतिहरू एक वर्ष गर्नेछ। नवीन मिसिन को पाठ्यक्रम सहित, "Aeroflot" धेरै एयरलाइन्स, को ध्यान आकर्षित।
ककपिट मिति लागि "पारदर्शी पर्खाल", र एक जोइस्टिक नक्कल तार नियन्त्रण प्रभाव प्रदान Ergonomic प्रदर्शित प्रयोग गरेर। को चालक दल, दुई, पहिलो र दोस्रो पाइलटहरूले हुन्छन् को पाठ्यक्रम बाहेक, उडान परिचारक, आर्थिक प्रदर्शन सुधार जो। नेविगेशन उपकरण को संभावना रूस मा साधन सिस्टम को बहुमत संग, धेरै उच्च छन्।
सुरुमा दुई प्रकार को पूर्ण प्रणोदन इन्जिन, अमेरिकी "प्राट्ट र विटने» PW1000G वा घरेलू पीडी-14 द्वारा JSC निर्मित "विमान यस समयमा पूरा जो lapping इन्जिन", को संभावना संग डिजाइन airframe। रूसी मोटर नै यो विमान उद्योग हासिल हुनेछ कि यस्तो दक्षता प्रदान गर्नुपर्छ। यो "Superjet-100" Sukhoi हाल पोको छ रूसी-फ्रान्सेली PowerJet SaM146 सहित अन्य विमान प्रयोग पछि शक्ति एकाइहरूको सम्पूर्ण दायरा उत्पादन सुरु, छ। पहिलो उदाहरण मा अमेरिकी इन्जिन स्थापित। विश्वव्यापी दृष्टिकोण पनि एमएस-21 विमान को प्रतिस्पर्धी अवस्था सुधार गर्छ।
प्रतियोगिता र लाभ
अब मुख्य कुरा, कि प्रबन्धकहरू निकटतम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आशावाद "Irkut" देखाउन अनुमति अर्थात् यो कारक। उड्डयन उत्पादन को बजार मा प्रतिस्पर्धा पनि खातामा मांग मा अनुमान वृद्धि आउँदै दशकहरूमा दुगुना लिएर, हाल उच्च छ, सय एक भन्दा बढी मानिसहरूको बस्ने क्षमता संग एकल-डिब्बामा विमान को खण्ड। यसको विकास सक्रिय Bombardier (सी श्रृंखला), Airbus, Boeing प्रचार, र चिनियाँ दृढ "Komaki" पनि चीन हुनत पहिले अग्रणी विमान शक्ति छलफल भएको थिएन। साथै, "Irkut", स्पष्ट, यसको नवीनता संग एक सानो लेट को प्रतियोगिहरु केही वर्ष अनुमति आदेश पुस्तकहरू प्राप्त गर्न।
संसारको बजार सार्दा "Superjet" रूसी पक्ष गल्ती को एक श्रृंखला बनाएको छ, र अब दोहोर्याउनु छैन क्रममा, ठीक तिनीहरूलाई विश्लेषण गर्न समय छ। त्यसैले, सबै को पहिलो मूल्य हो, यो $ कम भन्दा 30 mln।, कुन आजको न्यूनतम स्तर अनुरूपको हुनेछ। यो परिणाम कारण घटक को आधा भन्दा बढी रूस मा निर्मित भन्ने तथ्यलाई गर्न हासिल छ। दोस्रो, अघिल्लो असफल अवस्थामा गर्न विपरीत मा स्थापित गरिनेछ प्राविधिक पछि-बिक्री समर्थन संचालक को स्पष्ट प्रणाली। तेस्रो, मर्मत र इन्धन खपत कम से कम 15% अन्य आपूर्तिकर्ता संग मामला मा भन्दा सस्ता को अधिकार पट्टा गर्न खरीदार वा मोहि खर्च हुनेछ। साथै, कोष नै प्रक्रिया यसलाई संशोधित गरिनेछ व्यावसायिक बैंकहरू आकर्षित हुनेछ। यो सबै हामीलाई घरेलू मा मात्र होइन तर विदेशी बजारमा नयाँ रूसी विमान को सफलता मा गणना गर्न अनुमति दिन्छ। एमएस-21 स्पष्ट आकाश, सुन्दर नरम landings र takeoffs मात्र इच्छा।
विमान को keel कहाँ छ? विमान कियल: निर्माण
Boeing 747 400 - डबल-decked transcontinental airliner
स्क्रैप फलाम। पटक-पटक remelting लाभ उठाउन
उत्पादन लागत लागि लेखा को विधिहरू
वा डबल-पत्र क्षमता मानक: के चयन गर्न?
दबाइ "Stopdiar": समीक्षा र पुस्तिका
मोटर कौशल को विकास को लागि यो के हो र निर्देशन: हात को ठीक मोटर कौशल
दबाइ 'Epigenes' (स्प्रे)। निर्देशन र सिफारिसहरू
यो श्रेष्ठता को विशेष अधिकार सही छ
प्रभावकारी आहार कसरी पाउने हरेक दिन को लागि मनोविज्ञान।
Hairdressers बर्नाउल: विवरण र ठेगाना
आफ्नो हातले hairdryer मिलाप चिप्स: योजना र फोटो
Stannis Baratheon - श्रृंखला "Thrones को खेल" को नकारात्मक वा सकारात्मक चरित्र?
स्तन fibroadenoma कसरी उपचार गर्ने
आवेदन को एक समीक्षा: "एन्ड्रोइड" को लागि spyware